NextMapping | २०२० आफूलाई राम्रो गर्ने बर्ष
यो नयाँ दशकको शुरुवात हो र २०२० आफूलाई राम्रो गर्ने वर्ष हो।
यो हामी प्रत्येकका लागि राम्रो व्यक्ति बन्न हाम्रो प्रतिबद्धता बढाउने समय हो, राम्रो टोली प्लेयरहरू, र राम्रो नेताहरू। के तपाईं यसको जरुरीता महसुस गर्न सक्नुहुन्छ?
के तपाईं भविष्यको तानमा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ जुन हामीलाई परिवर्तन गर्नको लागि हाम्रो चाहनाहरूमा स्थिर रहन आग्रह गर्दैछ?
एक विकासवादी तहमा, हामीलाई हाम्रो मुख जहाँ छन् हाम्रो पैसा राख्न र हाम्रो कुरा गर्न हिडन भनियो। २०१० मा २०१० मा अन्त्य हुने भनेको एक्सपोजर, खुलासा र शोरमा सत्य पत्ता लगाउने बारेमा थियो।
In 2020 र पछाडि हामी नाम कलिंग, औंला-देखाउने र हाम्रो स्थिति प्रोजेक्ट बाहिर परेका छौं। स्पष्ट रूपमा नयाँ दशकले सामूहिक चेतना अपग्रेडतिर इशारा गरिरहेको छ जहाँ प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई परिवर्तन गर्दछ जुन हामी प्रत्येकले हेर्न चाहान्छ।
भविष्यमा सबै भन्दा राम्रो मानिस हुनु, मानवताको लागि राम्रो बढाउनु र राम्रोको लागि टेक्नोलोजीको लाभ उठाउनु हो। त्यहाँ कुनै प्रश्न छैन जुन २०२० आफूलाई राम्रो गर्ने वर्ष हो।
तलको द्रुत भिडियोमा म २०२० र अधिक र भविष्यको कलमा केहि थप अन्तर्दृष्टि साझेदारी गर्दछु।
यहाँ २०२० र तपाईंको उत्तम वर्ष कहिल्यै अर्थ, उद्देश्य, उत्कटता, र जडानको साथ भरियो!